Dalalka Bariga Afrika oo xal u raadinaya kacdoon ka taagan Burundi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdigan oo ka koobnaan doona wasiirada arrimaha dibeda ee wadamada Bariga Afrika ayaa ah talaabadii ugu horaysay kullan deg deg ah oo madaxda Bariga Afrika ay ka yeelan doonaan xaaladda dalka Burundi oo ay dibed baxyo ka dhacayey ay ku dhinteen in ka badan 10 qof maalmihii la soo dhaafay.
Afhayeen u hadashay wasaarada arrimaha dibeda ee dalka Tanzania ayaa sheegtay in wafdigan yahay mid xaqiiqa raadin ah, kaddibna warbixintiisa uu u gudbin doono madaxda Bariga Afrika oo laga yaabo in ay kulna deg deg ah ka yeeshaan xaalada siyaasadeed dalkaasi Burundi.
Waa markii ugu horaysay oo urur goboleedka Bariga Afrika uu wasiiro u dirayo Bujumbura isku day uu ku doonayo in uu ku dejiyo xiisada siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi burundi.
Burundi waa waddan ka soo kabanaya dagaalo sokeeye, waddamada xubnaha ka ah urur goboleedkana waxa lagu eedeeyey in ay ka aamuseen xaaladda ka taagan dalkaasi
Dhinaca kale xoghayaha arrimaha dibeda ee maraykanka John Kerry oo socdaal ku maraya wadamada geeska afrika ayaa sheegay in maraykanka uu ka walaacsanayahay xaaladda ka taagan dalkaasi Burundi.
Hay’adda bisha cas ayaa sheegaysa in 12 qof lagu dilay dibed baxyadda ka dhacaya Burundi oo ka dhashay kaddib markii madaxweynaha Burundi Piere Nkurunziza uu sheegay in uu isu soo sharaxayo jagada madaxweynanimo, arrintaas oo ay ka dhalatay dood xooggan
Dibed baxayaasha ayaa sheegaya in dastuurka Burundi aanu u ogolaanayn in mar sadexaad uu madaxweynaha isu soo sharaxo xilkaas..
Doorashada ayaa lagu wadaa in la qabto 26 bisha soo socota ee Juune.
Sarkaal ka tirsanaa jiray maamulka Juba oo lagu dilay magaalada Kismaayo